B2B Yemagariro Ekushambadzira Universe | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 28, 2012 Douglas Karr
B2B Yemagariro Kushambadzira inoda kumisikidzwa kwehuvepo uye kukura kwechiremera muindastiri yako. Makambani eB2B anotora zano rine hukasha rekuvaka kwavo pamhepo pamasocial media vanozivikanwa sevatungamiriri vanofunga uye kwavo kunounza bhizinesi. Ini kashoma kuona kambani yeB2B ichiputika mukukura isina nzira yekutengesa munharaunda munzvimbo. Uye ini ndaona akawanda mabhizinesi eB2B achinetseka nekuda kwekuti aishaya rimwe.
Mabhizinesi anonzwisisa kukosha kwekuwedzera zvemagariro kune avo ekushambadzira ekushambadzira anopa simba vatengi uye tarisiro yekugovana nemasaiti avo vachivaka maratidziro emhando. Iri pezera-kune-peer izwi remuromo mameseji rakavimbika kwazvo uye rinoshanda kwazvo mukusimudzira kukanganiswa kwemishandirapamwe yako.
Mune yavo infographic, iyo B2B Yemagariro Ekushambadzira, Marketo anoongorora zvinhu zvemubudiriro weB2B wekushambadzira munharaunda.
Tags: b2bb2b kutungamira chizvarwab2b kushambadzirab2b networkb2b kutengesab2b zvibodzwa